प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग मागे विश्वासको मत – Panchakoshi Daily
पंचकाेशि संवाददाता । २०७८ बैशाख २२, बुधबार मा प्रकाशित
काठमाडौं । पार्टीका नेताहरुसहित बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिन सहयोग मागेका छन् । तर कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ फर्काएको छ ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले २७ वैशाखको प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिन आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई फेल गराउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लिएर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
‘विश्वासको मतमा उहाँले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो हामीले स्वाभाविक रुपमा विपक्षी पार्टी हौं र हामीले तपाईंलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन भन्ने स्पष्ट राख्यौं’ बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि सँगै लडेका दलहरुबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर आफूहरुले भर्खर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुका साथै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा भएको गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको भन्दै सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यसअनुसार व्यवहारमा आउनुपर्‍यो ।’
साथै विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको उनले बताए । अनलाइन खबरबाट